အစိုးရဖြုတ်ချရေး သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်သည့်အမှု သံဃာတော်ခြောက်ပါးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၁)န?? - Yangon Media Group
အစိုးရဖြုတ်ချရေး သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်သည့်အမှု သံဃာတော်ခြောက်ပါးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၁)န??
မန္တလေးမြို့တွင် အစိုးရဖြုတ်ချရေး သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်၍ ဖမ်းဆီးခံရသည့် သံဃာတော်ခြောက်ပါးနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့ကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်က မန္တလေး မြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် (၁၉) ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ သံဃာတော် ခြောက်ပါးအား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နှင့် ၆ လ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”သံဃာတော်ခြောက်ပါးကို အလုပ်နဲ့ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နဲ့ ၆ လ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ချုပ်ရက် ထုတ်နှုတ်ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်၊ ဦးကျော်မျိုးရွှေအမှုကတော့ ဒီနေ့ ရဲမှူးဦးခင်မောင် ထွန်းကို စစ်ဆေးဖို့ ချိန်းဆိုထားပါတယ်။ တရားခံပြေး သံဃာနှစ်ပါးအမှုက သူတို့မျက်ကွယ်မှအမှုကို ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၇၊ ၈၈ အရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား တာပါ”ဟု ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တရားရုံး တွဲဖက်တရားသူကြီး သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဦးကျော်စွာလင်းက ပြောသည်။ မန္တလေးမြို့ သာသနာ ၂၅ဝဝ ဗိမာန်တွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်၍ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သပိတ် မှောက်ခဲ့သည့် သံဃာခြောက်ပါးနှင့် ကိုကျော်မျိုးရွှေတို့ကို ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ) ဖြင့် စွဲချက်တင်တရားစွဲဆိုထားရာ ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် သံဃာတော်ခြောက်ပါးကို အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နှင့် ၆လ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကိုကျော်မျိုးရွှေအား ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
”ရုံးက သင့်တော်တဲ့အမိန့်ကို ချခဲ့ပေမယ့် ဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကများတယ် ပေါ့။ ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ သုံးသပ် သုံးသပ်၊ ပြစ်မှုမကျူးလွန်ဘူးလို့ပဲ သုံးသပ်သုံးသပ်၊ ဒီနေ့ချခဲ့တဲ့အမိန့်က ကျွန်တော့်အမှုသည်တွေအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ တရားမျှတမှုမရခဲ့ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က အထက်ရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ဒီအမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ကြိုးစားသွားမှာပါ”ဟု သံဃာတော်သုံးပါး၏ အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးအောင်ရဲစိုးက ပြောသည်။ တရားရုံးမှ အမိန့်ချပြီး ပြန်ထွက်လာချိန် သံဃာတော်ခြောက်ပါးနှင့် ဝန်းရံသူ ၁ဝဝ ခန့်က ချမ်းမြသာစည်တရားရုံးအတွင်း တရားရုံးက ဥပဒေချိုးဖောက်နေကြောင်း၊ ဥပဒေအထက်တွင် NLD အစိုးရရှိနေကြောင်း၊ ဘယ်လိုဖိအားရှိနေပါစေ ထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာချိန် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် ဝန်းရံသူများနှင့်ပေါင်း၍ ဆက် လက်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းြေ<ွကးကြော်ခဲ့ကြသည်။
ရုံးထုတ်လာချိန်တွင် ဖမ်းဆီးခံသံဃာတော်များဖြစ်သော ဦးအရိယဝံသ(ပေါက်ကိုယ် တော်)၊ အရှင်ဣန္ဒက(ဣန္ဒဝီရ-လှည်းကူး)၊ ဦးအာစာရ(အရှင်အာစာရ-ဧရာဝတီ)၊ အရှင်ဝိဝေ ကာနန္ဒ(မင်းနန္ဒ-ဧရာဝတီ)၊ ဦးအဂ္ဂဓဇ(တောင်သာလေးဆရာတော်)၊ ဦးပဏ္ဍိတ(ပုဂံ-ဦးပဏ် ဆရာတော်)နှင့် ကိုကျော်မျိုးရွှေတို့၏ ဗီနိုင်းဓာတ်ပုံများအား အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား နေသည့် သံဃာတော်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များက ကိုင်ဆောင်ကာ ဝန်းရံခဲ့ကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ၂ဝ၂ဝ အိုလံပစ်ပွဲတော် မတိုင်မီ နည်းပညာပြပွဲ ခင်းကျင်းပြသ
နှလုံးနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ကုသပေးမည့် ကန်သာယ
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အကြို အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ မန္တ
အန်ကောဝပ်ဘုရားကျောင်းဝန်းကျင်မှ မြက်ခင်းများပေါ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ မုန့်မစားရန် ကမ္ဘောဒီးယား တားမြစ်
ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ကို အသက်တမျှ တန်ဖိုးထားကြရန် သမ္မတ ပြောကြား
ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားသားများ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ရှယ်ယာဝယ်ယူခွင့် ရတော့မည်
ပထမကမ္ဘာစစ် အတွင်း ပြင်သစ်စစ်မြေပြင်၌ အမှုထမ်းခဲ့သည့် ဇိုမီး သူရဲကောင်းများအတွက် နှစ်တစ်ရြာ